Qorraxda: Asal ahaan – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Qorraxda: Asal ahaan – Khiyaamo&Hack
Waxaa qoray maamulka | Oktoobar 17, 2021
Aduun weyn oo rabbada ka dambeeya oo leh su'aalo badan oo kala duwan!
Nidaam farshaxan oo qumman! Soo ururi hubkaaga xoogga!
Sawirro cajiib ah oo ku yaal goobaha ugu badan!
Ciyaar ficil ah oo leh canaasiirta RPG ee adduunka naxariis darada ka dib, adduun shucaac leh, gaajo iyo cudur. Kaliya dhowr qof ayaa u suurtagashay inay ka badbaadaan weerarkaas halista ah ee ku dhacay meeraha hawada sare, laakiin wakhti yar ka dib ayaa masiibo cusub bilowday inay halis geliso kuwii badbaaday. Iyo dabeecadda ugu weyn, the Chosen of the North-216 Bulsho, waa in ay wax ka qabtaan.
Adduunyada dabadhilifyada. Qofka ugu horreeya ee toogtay si uu u noolaado.
Asalka Qorraxda: Ficilka raagada ka dib - waa toogte-qofkii ugu horreeyay oo leh walxaha RPG oo leh taariikhdeeda, boqollaal hawlood, hub iyo hub aad u badan, ganacsiga, kooxaha dagaalamaya, mutants, budhcad iyo dabadhilifyo. Ku sahamin adduunka tiro badan oo goobo ah, ka iibso hubka ugu fiican ganacsatada oo hagaajiso. Waxaad u baahan doontaa kaliya qalabka ugu fiican! Ka dib oo dhan, Hadafkaaga ugu weyn waa inaad bulshadaada ka badbaadiso gaajada. Halgankii badbaadadana ha bilaabo!
Sannadkii 2050, Qorraxdu waxay soo saartay masiibo ba'an oo tamar ah oo hawada sare gashay, mowjad awood ah oo ilbaxnimadeenna gelin karta fowdo qarniyaal badan. Inkastoo ay saadaaliyeen muddo sanado ah bulshada cilmiga sayniska, Digniintoodii waa ay iska dhega tireen madaxdii dunidu oo taa beddelkeeda ku murmay arrimo yar yar oo dhuleed.
Markii mawjada tamarta dhulka ku dhufatay, Duufaan ka kooban qaybo shucaac ah ayaa daboolay jawiga si dhimasho leh, ceeryaamo kansarka. Ceeryaamo ayaa si aan kala sooc lahayn u dishay… dhallinyaradii, jir, Taajir iyo faqiirba si siman bay u dhaceen. Keliya kuwii dhegaystay digniinaha oo gabaad ka dhigtay tufaaxyo la dayacay ayaa la badbaadiyay.
Markii ay aakhirkii sahaydoodii ka dhammaatay oo beelahaas lagu khasbay inay ka soo baxaan hoygoodii, waxay arkeen duni cusub oo cidla ah iyo fowdo. Adduun ay shuruucdii ilbaxnimada lagu beddelay xeerkii qoriga. Goobihii yaraa ee weli biyo nadiif ah iyo dhul beereed leh ayaa waxaa gacanta ku hayay qabqablayaal aan naxariis lahayn iyo ciidamadooda.
Waxay ahayd adduunkan in dagaalyahan loo yaqaan Raven oo keliya uu ka soo bixi doono. Halgaag dadkiisa samatabbixin lahaa isagoo cidlada u qalooci doona rabitaankiisa. Dagaalyahan maalin uun noqon lahaa halyey.
Waa caqabad! Aduunyada Aakhiro ama adiga?
Ciyaartoyda qaaliga ah! Ciyaartaan waa mid aad u adag! Haddii aad rabto in aad nasato ciyaarista The Sun Origin: Falka Raabada ka dambeeya RPG, waxa fiican inaad hesho ciyaar kale oo madadaalo wacan ah. Sababta ciyaartaan waa cadaab! Tan iyo bilawgii mashruuca dhawr ciyaartoy ayaa ku noolaan kara xaaladaha qallafsan ee Wasteland! Laakiin haddii aad weli go'aansato inaad isku daydo, ha ka caban faallooyinka inaad u dhimato shucaac, sumayn, harraad iyo gaajo! Hana dhihin cidna uma digin! Kaliya ciyaartoyda aadka u feejigan wax dhib ah kalama kulmi doonaan ka badbaadista adduunka The Sun: Asal ahaan! Nasiib wanaagsan!
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Asal ahaan, Sun
← Ciyaarta Squid 3D: Iftiin cas, Iftiin Cagaaran! Khiyaamo&Hack Kyle waa caan – Khiyaamo&Hack →
Slash & Duub: Live Guild Raids Cheats&Hack
Loolanka Squid: Ciyaarta badbaadada – Khiyaamo&Hack
Fantastic Beasts’ Legend – Khiyaamo&Hack
We Are Illuminati: Conspiracy – Khiyaamo&Hack
Garbage Pail Kids : Khiyaamada Ciyaarta&Hack
Real Boxing 2 – Khiyaamo&Hack
Inside Out Thought Bubbles – Khiyaamo&Hack
Emoji Iswaafajinta Halxiraalaha Maskaxda Kor – Khiyaamo&Hack
Badbaadinta Ciyaaraha Squid – Khiyaamo&Hack
Te Reo Māori/mi/the-sun-origin-cheatshack/
gagana fa'a Samoa/sm/the-sun-origin-cheatshack/